काभ्रेलाई आर्थिक समृद्धिसहितको लाल किल्ला बनाउने मेरो सपना हो : रत्‍न ढकाल | SaraKhabar.com
काभ्रेलाई आर्थिक समृद्धिसहितको लाल किल्ला बनाउने मेरो सपना हो : रत्‍न ढकाल
तपाईको राजनीतिक सक्रियताको भूगोल फरक भएर पनि होला, हामी रत्‍न ढकालाई चिन्दैनौँ भन्ने धेरै निस्कियो नि ?
तपाईले सही प्रश्न सोध्नुभयो । मेरो उम्मेदवारीपछि मसँग व्यक्तिगत रुपमा परिचित छैन भन्ने धेरै हुनुहुन्छ । तर काभ्रेका आम मतदाता र वाम गठबन्धनका साथीहरु रत्‍न ढकालसंग परिचित हुनु वा नहुनु गौण विषय हो ।
निर्वाचनको बेलामा को कससँग परिचित छन् भन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । वैचारिक रुपमा कम्युनिष्टको पक्षधरता भएका एमाले माओवादीका साथीहरुले आफ्नो पार्टी र चुनाव चिन्हलाई चिन्नु पर्‍यो । वाम गठबन्धनले उठाएको एजेण्डालाई चिन्नुपर्‍यो । त्यसपछि व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तार हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मेरो राजनीतिक भूगोल हिजो फरक थियो । अब मेरो राजनीतिक भूमि काभ्रे नै हुन्छ । त्यहाँका साथीहरुको सुखदुखमा म सँगै हुनेछु ।
अन्य उम्मेदवार र तपाईको उम्मेदवारीमा के फरक छ ?
हामी अहिले जुन निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्दैछौ, पहिलो त यो निर्वाचन नै यसअघिको निर्वाचनभन्दा धेरैभन्दा धेरै फरक छ ।
अहिले हामी १० वर्षको महान जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघात्मक शासन प्रणालीको निर्वाचनमा छौँ । पहिलो त यो निर्वाचन प्रणाली नै फरक छ ।
अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुको आजको परिवर्तनका निम्ति एक थोपा पसिना पनि बगेको छैन भन्दा फरक पर्दैन । मैले अर्थात हाम्रो गठबनधनका उम्मेदवारहरुले यो परिवर्तनका निम्ति आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन तयार भएको कुरा सबैलाई थाहै छ । म आफू यो परिवर्तनका निम्ति ज्यानको माया मारेर जनयुद्धमा होमिएको व्यक्ति हुँ, यो परिवर्तनको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का मलाई जति अन्य पार्टीको उम्मेदवारलाई छैन ।
प्रतिस्पर्धा कतिको सहज देख्नुभएको छ ?
हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौँ । र हामीले निर्वाचनमार्फत हुने प्रतिष्पर्धालाई स्वीकारेका छौँ ।
कम्युनिष्टहरु प्रतिष्पर्धालाई स्वीकार गर्दैनन् र एकल शासन लाद्न चाहन्छन् भन्ने विरोधीहरुको आरोपलाई हामीले व्यावहारिक रुपमै खण्डन गरेका छौँ । प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्ने कुरालाई सहज रुपमा स्वीकार गरेका छौँ ।
निर्वाचनमा कयौँ पटक प्रतिष्पर्धा गर्दै पोख्त भएका नेपाली कांग्रेससँग अहिले हामी प्रतिष्पर्धामा छौँ । कांग्रेसहरुले जाल, झेल षडयन्त्र र जनताको मतहरुलाई अपमान गर्न सकिन्छ भन्ने सिकेका छन् । यो चुनावी मैदानमा कांग्रेसबाट हुने त्यस्ता खालका गतिविधिलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने नै आजको बहसको विषय बनेको छ । तर प्रतिष्पर्धा गणितिय हिसाबले म सहज नै देख्छु ।
चुनाव जित्ने आत्मविश्वास कति छ ?
चुनाव हामीले जितिसक्यौ । अब औपचारिक रुपमा घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । उम्मेदवारको मनोनयनका दिनमा वाम गठबन्धनप्रति जनताले देखाएको उत्साह र जनसहभागिताले पनि हामीले चुनाव जितिसकेको पुष्टि हुन्छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो स्थानीय तह र ०७० सालको मतपरिणाम हेर्दा पनि हामीमाथि कांग्रेसलाई भन्दा हजारौँ मतदाताको समर्थन बढी छ । त्यस्तै मतदाताको हरेक समस्या समाधानका निति हामीले देखाएको तदारुकताका कारण पनि मतदाता हामीलाई मतदान गर्न हतारमा छन् । र हामी जित औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ ।
२०६४ सालको मतपरिणामलाई हेरेर निर्वाचनमा जाँदा ०७० सालमा माओवादीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको इतिहास छ नि ?
०७० र अहिलेको निर्वाचन विशुद्ध फरक ढंगबाट हुँदैछ । २०७० सालमा माओवादी पार्टी बिभाजित थियो । त्यतिबेलाका विभाजित माओवादी अहिले मिलेर माओवादी केन्द्र बनेको छ ।
त्यसैगरी अहिले दुई ठुला दल एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएको छ । वामगठबन्धनको रुपमा निर्वाचनमा होमिरहेको अवस्थामा हामी विपक्षी शक्तिभन्दा मतको हिसाबले वा संगठनात्मक हिसाबले पनि धेरै बलियो छौँ । यसअघिका निर्वाचनमा हाम्रो केही आन्तरिक र बाह्य त्रुटि थियो । अहिले हामी आन्तरिक र बाहय दुवै रूपमा बलियो छौँ ।
एमालेको मत पाउन कति सहज देख्नुभएको छ ?
एमाले र माओवादी लगायतका वामपन्थी दल अहिले चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकतासम्म जाने सहमति साथ अगाडि बढेको तपाईलाई थाहै छ । अहिले कार्यदल नै बनाएर दुवै दल अगाडि बढिसको अवस्थामा कोही कसैबाट घात हुन सक्ने अवस्था छैन र हुँदैन ।
हामी कुनै सानो र क्षणिक लक्ष्यका साथ एकताबद्ध भएका छैनौँ । हामी एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने र समाजवादको कार्यदिशामा अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ एकताबद्ध भएका छौँ ।
त्यसैले वैचारिक रुपमा अघि बढिसकेको यो विषयमा प्राविधिक रुपमा कोही कसैले घात गर्छ या मत दिँदैन कि भनेर आशंका गर्न जरुरी छैन । माओवादीबाट एमालेलाई वा एमालेबाट माओवादीलाई अन्तर्घात हुने परिस्थिति छैन ।
तपाईको लडाई त समाजसेवी+विकासप्रेमी भनिने दलको उम्मेदवारसँग हुँदैछ भन्ने छ नि ?
निश्चित रुपमा दक्षिणपन्थी पँुजीवादीहरुले धेरैखाले विकृतिहरु प्रयोग गर्दै आएको इतिहास हामीसँग छ । जनताले तिरेको करबाट राज्यको ढुकुटीको प्रशस्त दुरुपयोग गर्दै विकासको नाममा दुई चार रुपियाँ दिँदैमा कोही पनि विकासप्रेमी हुन सक्दैन ।
एनजिओमार्फत डलरको खेती गरेर जनताको आँखामा छारो हालेर विकासको नारा बजाउनु कदापी ठीक छैन । किनकी जोकोही व्यक्तिले ल्याएको विकासका काममा सबै राजनीतिक दलको उत्तिकै उतरदायित्व रहन्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दलका व्यक्ति वा उम्मेदवारले खल्तीबाट हालेर विकास गरेको छैन । राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै समाजसेवीको रुपमा गाउँमा पस्नेलाई काभ्रेली जनताले राम्रोसँग चिनिसकेका छन् ।
यसअघिका दिनमा कांग्रेसले समाजमा गरेका कामहरु जनताले छर्लङ्ग देखिसकेका छन् । कांग्रेसले कसरी जनताको आँखामा छारो हालेको छ भन्ने कुरा काभ्रेका आम मतदाताले पनि बुझिसकेका छन् ।
चुनावी एजेण्डाहरु चाहिँ केके छन् ?
पहिलो कुरा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।
नयाँ संविधानमा समाविष्ट संघीय गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता लगायतका परिवर्तित एजेण्डाहरुलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय, नयाँ नेपाल र समृद्धि नेपाल कसरी बनाउने भन्नेतिर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ ।
त्यसैगरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जनस्तरसम्म पु¥याउने लक्ष्य पनि मैले लिएको छु । शैक्षिक गुणस्तरको विकास गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण गदैै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अब हामीले उठाउने एजेण्डा र बनाउने योजना यही नै हो ।
त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लागत हिसाबले समग्र काभ्रेलाई उज्यालो र समृद्ध बनाउने मेरो सपना हो । काभ्रेलाई पर्यटकीय जिल्लाको रुपमा अगाडि बढाउँदै पर्यटन विकासको सम्भावनाको सदुपयोग र उपयोग गर्न ठोस योजना लिएर अब जनतामाझ जान्छु । त्यस्तै सुनकोशि, रोशी नदीलाई सही सदुपयोग गरि उज्यालो काभ्रे बनाउने र अर्थतन्त्रको हिसाबमा समृद्धि काभ्रे बनाउने नै मेरो मुख्य सपना हो ।
विपक्षी पार्टीले धेरै किसिमको भ्रम फैलाइएको छ, कसरी चिर्नुहुन्छ ?
विपक्षी कांग्रेसले अहिले दुईवटा कुरामा भ्रम सिर्जना गरेको पाइन्छ । पहिलो कुरा कांग्रेसले आम मतदातामा मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ ।
हामी १० वर्ष जनयुद्ध लडेर आएकाहरुसँग र त्यस पार्टीमा विश्वास राख्ने मतदातालाई मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्न खोजेर केही हुनेवाला छैन । किनकी हामी युववार्ग जस्तोसुकै परिस्थितिलाई तोडेर अगाडि बढ्नका लागि सचेत छौँ ।
हरेक राष्ट्रियताको आन्दोलनमा हामी ज्यानको बाजी थापेर अग्रसर भएको सबैलाई थाहा छ । अहिले पनि जस्तोसुकै कठिनाईका बीच हामी अग्रपंक्तिमा रहन्छौँ ।
अर्को कांग्रेस धनको आतंक सिर्जना गरेको देखिन्छ । अहिलेका मतदाताहरु विवेकी छन्, उनीहरु विवेक प्रयोग गर्छन् । कांग्रेसको एक छाक मासु र चिया भातमा काभ्रेली मतदाता बिक्नेवालामा छैनन् । कांग्रेसले फैलाउन खोजेको यी दुईवटै आतंक र भ्रमलाई चिर्न हामी सचेत र तयार छौँ ।
काभ्रे क्षेत्र न. १ प्रदेश न. १ का सभासद रत्न ढकाल सारा खबरसंगको कुराकानी ।
सभासद रत्न ढकालले अबको ४ वर्ष भित्रमा महाभारत गाउँपालिका , रोशी गाउँपालिका , नमोबुद्द ...
आर्थिक विकास नै बामपन्थी सरकारको मूल मुद्धा –डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
अबको केही साता पछि वामगठवन्धनको सरकार निर्माण हुने पक्का पक्की भईसकेको छ । यति बेला ...
बनेपा । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलोचरणको निर्वाचनमा हिमाली तथा उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा छिटफूट घटना ...